पैसा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमय दर | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पैसा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विनिमय दर
भदौ २ गते, २०७६ - १३:२९
काठमाडौं । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३७ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रिदर १३८ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १७ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुवेती दिनाार एकको खरिदर ३७३ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३७५ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३०१ रुपैयाँ १९ पैसा तथा बिक्रिदर ३०२ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर
भदौ २ गते, २०७६ - १३:२९ मा प्रकाशित